Taraafikada Maya!, Barnaamij si looga feejignaado shucaacyada waddooyinka | Wararka IPhone
Mid ka mid ah faa'iidooyinka weyn ee is-dhexgalka GPS-ka ee mobilada ayaa ahaa marin hagis, taas oo lagu daray heerarka xogta ayaa noo oggolaatay inaan helno macluumaad. waqtiga dhabta ah waddooyinka iyo dhacdooyinkooda, waxa ugu xiisaha badan dabcan waa ogaysiisyada shucaacyada joogtada ah iyo kuwa wareega.
2 Faahfaahin si loo hagaajiyo
Sida iska cad muuqaalka xiddigga dalabka ayaa ah shaqada digniinta radar. Taraafikada Maya! Waxay leedahay keydka macluumaadka ee Robser Premium, kaas oo hubiya in aan la soconno waqtiga ugu dambeeya xagga xakamaynta xawaaraha. Dabcan, in kasta oo adeegsadayaasha caadiga ah ay kufilan karto, waxaan kugula talinayaa in laguu buuxiyo dariiqyada dalab kale ama adeeg digniin bulshada ah (sida Waze ama Social Drive) hadaan rabno inaan helno dhamaan macluumaadka suurtogalka ah.
Digniinta radarka waxay ku dhacdaa oo kaliya jihada saxda ah ee safarka, wax aan codsiyada kale ee digniinta radar-ka aaney helin oo la mahadiyo. Kale fursado xiiso leh sida codadka aamusnaanta leh ee aamusnaanta haddii ay dhacdo inaad ku socoto xawaare sax ah, qaab jiif ah, xawaare xawaare dhab ah oo leh xogta GPS ama ogeysiisyo si aad noogu digto shaashadda.
Faahfaahin si loo hagaajiyo
Waxa ugu muhiimsan ee dhammaan waa in la caddeeyo in codsigu si dhammaystiran u guto himiladiisa. Taasi waa, waxay nooga digeysaa shucaacyada socda, waxay na siinaysaa qiimaha shidaalka, sheeg dhacdooyinka taraafikada xogta laga helo ilo badan oo xitaa noo ogolaanaya inaan ilaalino kaamerooyinka taraafikada ee wadada ku jira. Laakiin waxaa jira waxyaabo aan macquul ahayn.
Faahfaahinta ugu weyn ee lagu hagaajinayo ayaa ah naqshad. In kasta oo ay run tahay inay u hoggaansameyso iyadoo la adeegsanayo ku dhowaad gebi ahaanba xubno ka kooban Apple oo ku jira Xcode, haddana waa iska cadahay aragtida koowaad in arjiga aan si aad ah looga shaqeyn dhinacan. Astaamaha looma adeegsanin si waafaqsan (safka kore ee khariidada taraafikada qaar baa la buuxiyay kuwa kalena waa faaruq yihiin, tusaale ahaan), shaashadda digniinta waa mid aad u fudud oo guud ahaan waxay siineysaa aragti ah in wajiga kor loo qaadayo uu wax ku ool yahay. kuul si loo buuxiyo habsami u socodka.
Markii aan aragnay tartamayaashooda annaguna ma seexan karno gacmaha madaxa, sababtoo ah beddelka kale ee qaybta ayaa isku mid ah ama ka xun marka la eego adeegsadaha isticmaalaha. Laakiin ka taxaddar, shaqeynta abku waa ka saxsan yahay naqshaduna wali waa wax lagu xallin karo cusbooneysiinta mustaqbalka, markaa haddii ay tahay inaad kala doorato barnaamij qurux badan oo aan si fiican u shaqeynayn iyo mid ka qurux yar oo si sax ah u shaqeynaya, doorashada labaad way cadahay. Oo la doorto digniinta radar, iyada oo waayo-aragnimadii ugu fiicneyd ee aan soo maray la joogay tan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Taraafikada Maya!, App ah in laga feejignaado shucaacyada waddooyinka